Luis Suarez Oo Xulkiisa Urugauy Ka Reebay Copa America Iyo Isku Aadka Afar Dhamaadka Tartankan Oo dhamaystirmay. - Gool24.Net
Luis Suarez Oo Xulkiisa Urugauy Ka Reebay Copa America Iyo Isku Aadka Afar Dhamaadka Tartankan Oo dhamaystirmay.
Xulka qaranka Peru ayaa si layaableh ugu soo baxay afar dhamaadka Copa America kadib markii ay tartankan ka cidhibtireen xulka Uruguay iyada oo waliba Luis Suarez uu sabab u noqday in xulkiisu uu tartankan ka hadhay.
Xulka Peru oo markii hore ka mid ahaa xulalka la filayay in ay heerkii groupyada ugu hor hadhi kareen ayaa ka mid noqday afarta xul qaran ee u soo baxay tartanka Copa America ee dalka Brazil ka socda.
Urugauay ayaa saddex gool laga diiday intii ay socotay ciyaartii Peru waxayna labada xul ku fashilmeen in ay wax goolal ah kala dhaliyaan taas oo keentay in rekoodhayaal lagu kala saaray.
Shantii ciyaartoy ee xulka qaranka Uruguay kubbada rekoodhayaasha ah u tuuray dhamaantood way dhaliyeen marka laga reebo xidiga ay murugadu u soo hoyatay ee Luis Suarez kaas oo rekoodhihii uu tuuray laga beeniyay.
Laakiin xulka Peru ayaa ku guulaystay in ay dhamaan wada aaseen rekoodhayaashii ay tuureen waxayan Uruguay ku garaaceen 5-4 rekoodhayaal ah taas oo ka caawisay in ay u soo baxeen afar dhamaadka Copa America.
In Luis Suarez uu xulkiisa Uruguay ka reebay Copa America waxay sabab ugu noqotay in uu oohinta xejisan kari waayay maadaama oo uu doonayay in uu tartankan xulkiisa kula sii jiro.
Hadda waxaa dhamaystirmay afar xul ee mid ka mid ahi uu ku guulaysan doono Copa America iyada oo Brazil, Argentina, Chile iyo Peru ay koobkan ku sii tartami doonaan.
Inkasta oo uu xulka Peru ku fashilmay in ay hal bartilmaameed oo goolka Uruguay ah ay sameeyaan, haddana waxay awoodeen in ay gool la’aan ku qabteen Uruguay iyada oo goolal ay dhaliyeen Uruguay offside ahaan loo diiday.
Iyada oo horeba loo ogaa in Brazil iyo Argentina ay iskaga hor iman doonaan afar dhamaadka Copa America, waxa uu xulka Peru balan ka samaystay difaacdayaasha tartankan ee Chile kuwaas oo markale doonaya in ay koobkan sii haystaan.
Isku Aadka Afar dhamaadka Copa America: